बयान नलिएपछि फेसबुकमा स्टाट्स लेख्दै यसो भने रविले ?
काठमाडौं । प्रहरी हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेका नाममा पछिल्लो समय स्टाटस लगातार आउन थालेका छन् ।
खाना पुर्याउन जाने बेला उनकी पत्नी निकिता पौडेलले म्यासेज सार्वजनिक गर्ने गरेकि छन् । आइतबार अदालतमा बयान नभएपछि निकिताले रविको सन्देश भन्दै फेसबुकमा यस्तो लेखेकि छन् ।
रविको मोबाइल अनुसन्धानका लागि अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छ । के रविले निकिताको मोबाइल आफै चलाएर लेख्छन् ? निकिताको अकाउन्टबाट रविका नाममा आएका स्टाटस यस्ता छन् । यस्तो छ निकिताको एकान्टबाट पछिल्लो समय आएको स्टाटस्
“हाम्रो समेत सहयोगले अनुसंधान सम्पन्न भई नेपाल सरकारको तर्फबाट आज चितवन जिल्ला अदालतमा म,युबराज र अस्मिता समेत बिरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भएको छ । म समेतको वयान कार्य हुन नभ्याईएकोले भोली बांकी कार्य सम्पन्न भई न्यायलयबाट न्याय पाउनेमा हामी विस्वस्त छौं ।”
“देश तथा विदेश मा रहनु हुने न्यायको लागि अहोरात्र चिन्तित हुनुहुने सबै प्रति म हृदयदेखि धन्यबाद नदी बस्न सकिन । न्यायालय प्रतिको तपाई हाम्रो बिस्वास कदापि टूटने छैन “ : रबि लामिछाने
We want JUSTICE not POLITICS ??
हिरासतबाटै रविको अन्तरवार्ता बाहिरिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र म्योसज सार्वजनिक गर्नेमाथि कारबाही गर्ने जनाएको थियो । तर,लगातार हिरासतमा रहेका व्यक्तिका सन्देश बाहिरिन थालेपछि प्रहरी हिरासतकै खिल्ली उडेको धेरैको टिप्पणी छ । कि लामिछानेकि पत्नी निकिताले रवीको नाममा आफै स्टाटस लेख्छिन् ?